Maanso: Haween iyo Hoggaan – Bashiir M. Xersi
Date: 24 Aug 2013Author: Bashiir M. Xersi 1 Comment
Hoggaanka dalka ugu sarreeya wuxuu meertu iyo dhextaal u ahaa Mileteri iyo Madani, dib waxaa uga soo biiray Qabqable iyo Wadaad, oo kuwii hore musuqmaasuqa iyo murrugmaarugtaba uga dheereeyey.
Maansadan gaaban iny tilmaamayso HOGGAAN HUBBAN iyo HOGGAAMIYAHA KU HABBOON Soomaali ka sokow, waxayba ku soo daraysaa qayb aan marna xilkaa qaban, loona dhiiban, xoogna ku raadin, ahna cunsur aasaasi iyo lafdhabar u ah bulshada.
Sida rag badan soo jeediyeen ama qabaan BEELAYSIGA iyo AWOOD QAYBSIGA GOBOLLADA kuma sulaysna, ee waxaan ku saleeyey aragti aan horay u soo bandhigay intii aysanba dhicin doorashadii bishii September ee sanadkii hore, aragtidan oo ku dhex milnayd qormo qaybo dhawr ah lahayd, oo cinwaankeedu ahaa: “Marxaladda kala guurka ah iyo Madaxda mustaqbalka” liilkan hoose ayeyna ku lifaaqan tahay:
Maadaama dhismaha Golaha Wasiirrada laba hablood lagu daray, hoggaanka xukuumadda iyo dawladdanna ay ammaan ku muteen, ayaan meel ka fog iyo madal ka dheer farta ku fiiqayaa, anoo leh; bal mar uun dumarka ha lagu dayo saddaxda xil ee ugu sarreeya dawladda ee kala ah; MADAXWEYNE, RA’IISUL WASAARE iyo GUDDOOMIYE BAARLAMAAN, hubaal ilaa hadda in dumarku ragga dhan walba uga fiican yihiin, haddana, taa unbaa noo dhimman, ee bal mar ha lagu dayo. Maansadiina waxay tiri:
Hambaliyo salaan iyo
Haatuf iyo dhambaal iyo
Hal abuur inaan diro
Hoobeey inaan dhaho
Inaan curiya heesaha
Aan u dhiibo hobollada
Hilowgaan u qabay waa
Iga haadyey xiisuhu
Mar haddii halhayskiyo
Hal beeggiiba laga dhigay
Ugu wacan haldoorkeed
Mar haddii habkeediyo
Heerkeed la marinayn
Mar haddii hankeedii
Habacsanuhu daray dhigay
Hibashadu waxay tahay
Waligii halyeey saxan
Hoggaan maamuloo wacan
Hoggaamiya ma uu helin.
Halkii layga tagay iyo
Huddii laygu siray iyo
Ayaan wali hirtaayoo
Hashu wayga gurantoo
Hamuuntiina ima dayn!
Hurdo dheer ayaan galay
Sanadaan hawada iyo
Ku maqnaa hiraan jirin.
Hantidayda tiro iyo
Lama koobin Halaheed
Hoos guntiyo Garraar iyo
Hu’na waan ka waayoo
Hooy gaara maba lihi.
Hal hal baan u kala aal
Mid mid baan u kala haray
Hiddahaygii wuu lumay
Haybtiisa laba waa
Halgamaa umuu dhalan
Horseed fiican lama arag
Gacan haadis muu helin.
Cid midaysa muu helin.
Ninkeey hali ka maqan tahay
Wax kastoo uu haabtiyo
Haan gorof ka baaryee
Aan haddeersho sheekada
Ku hagaagsho qodob iyo
Halka maanta naga maqan!
In halaag na soo maray
Oo habaasku nala degay
Habqan aan ku sugan nahay
Uma baahna taas hadal
Waxa iiga halis badan
Hadhaw iyo had dheer iyo
Siiyaalka soo horan
Inta hirar ku soo maqan
Marna aan hakanahayn!
Ways hareer maraanoo
Harka labada gallinbeey
Mid ka mida haleelaan.
Habedkiyo dan seeggiyo
Habacsane sad kuma lahan.
Ma hubsade dibaadiyo
Hoorigu wax kuma laha.
Bulsho waxa hormarin kara
Heegadaana gayn kara
Waa hogganka kii hubban
Hoggaamiyana loo helo
Soomaali hore iyo
Hadda iyo hadhaw iyo
Kan hagaa ma yahay saas?!
Hilinkiyo dhabbaha sugan
Haddii aad ka bayrto
Waa hubaal inaad lumi
Inta aad hannaan saxan
Ku haloosin hiigsiga
Heehaab wareer iyo
Hurdo qarow ma dayside.
Halyeey loo duceeyoo
Hinjin kara dalkoo idil
Hayinnimo dulqaadka ah
Hiil iyo waxqabadnale
Oo hamuunta goyn kara.
Halgamaa xaq dhawroo
Himiladooda aan dilin
Aan halalac dhaafsanin!
Hufnaan iyo garaad iyo
Haybad iyo kalsooniyo
Hibo qaab u gaariyo
Hagaajiye inuu yahay
Waa astaamo hoodiyo
Ayaan Eebbe lagu halo.
Siyaasiga hunguri iyo
Sedbursiga u heeggani
Tii Allaba haraatiye
Raggii waa hallowyoo
Hadalkood wuxuu yahay:
Haween waa nusqaanoo
Haaf waaye kala maqan
Marna aan na hagi karin
Oon hoggaanba qaban karin.
Hor Allee sidaan hubo
Huriwaa ma sheegaa
Iyo midaan habayn iyo
Kala haadin aan rabin
Haweenkaaba ugu mudan!
Hiif iyo dagaal iyo
Hoog iyo harraad iyo
Wixii holac la soo maray
Habluhu maalin may galin
Hadaf xumo namay badin
Hilbaheenna may cunin
Hambawlaha namay jarin
Hanaqana namay gooyn
Waa hubanti hadalkani
Ama Haybi ruux kale!
Hindisuhu wuxuu yahay
In haween la soo xulo
Hormuudkeenna laga dhigo
Gabar heellan lama weyn
Hore looma soo arag
Iyagoo hoggaanshe ah
Iyagoo horyaal ka ah
Heelka madaxdu joogto
Iyagoo hubka u sida.
Hiyi kicin igama aha
Hadaddaamo iyo been
Hanqaltaag inaan galin
Hawo iyo waxaan jirin
Way hanan karaanoo
Way hoggaamin karayaan
Hammi iyo wanaagiyo
Himilayna noo furi
Hablo gaaray weeyaan.
Hadaf iyo ujeed qoran
Hab iyo seeto kuma weyn
Hanad celiya laba waa!
Diintu waa halkeedii
Yey hummaagtu ku talin
Isu eeg kor iyo hoos
Huuhaa ka soo hare
Culimada hal weydii:
Haween talo ha weydiin
Yaa yiri: hurdaayoow?!
Had iyo jeer wixii dhaca
Ama haatan wali jira
Hohe waxaan la goyn karin
Ha malayn inay tahay.
Ha ka ridin hagoogtee
Kii la haray ka reeboo
Adna hoog ha gaarsiin
Hagarqabe ha moogaan
Haddaad hoga tusaalayn.
Hadba dhinac u jiidmee
Hooris iyo dhammayntii
Hadalkeyga soo xiray
Iyo hubbanti guul wacan
Oo haweeni madax tahay.
Previous Previous post: Xasan Shiiqoow: Xarun CAAFIMAAD iyo Xalqo CILMI haysku xaadirin!
Next Next post: Ku meel gaarkii ma laga baxay?!
One thought on “Maanso: Haween iyo Hoggaan”